हात्तीमाथी `क्रूरतम पर्यटन´ (भिडियोसहित) - Jagaran Post
Jagaran Post १५ पुष २०७८, बिहीबार ०८:१३
बिजय ज्ञवाली – पर्यटन उद्योगको नाममा थाइल्याण्ड, भारत र नेपालमा हात्तीमाथी क्रूरतम व्यवहार गरिंदै आईएको तथ्य बाहिरिएको छ। जनावरहरुप्रति सद्भाव राख्ने यौटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा हात्ती पर्यटनको नाममा हात्तीमाथी चरम शोषण, दुर्व्यवहार र तिनीहरुको दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो। साथै उनीहरूले पर्यटकहरुलाई हात्ती सवारीबाट टाढा रहन पनि अपिल गरेका छन।
हात्ती पर्यटनको नाममा थाइल्याण्ड, भारत र नेपालमा हात्तीहरुमाथी चरम शोषण हुँदै आएको छ। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्सन (वाप) नामक संस्थाले एशियाभरि गरेको एक अध्ययनले हात्तीमाथीको सवारी र हात्तीसंग सम्बन्धित अन्य मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले हात्तीको शोषणलाई मात्र बढावा दिएको निष्कर्ष निकालेको हो। मानिसद्वारा हात्तीमाथी गरिने यसप्रकारका हर्कतले हात्तीहरुको स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाऊने अधिकारको समेत हनन भएको बताईएको छ।
पर्यटन उद्योगका लागि भनेर बन्दी बनाईएका ३ हजारभन्दा बढि हात्तीमध्ये ७५ प्रतिशत हात्तीलाई मनोरञ्जन प्रक्रियामा सहभागी गराऊन नियमित यातना दिने गरिएको (World Animal Protection – WAP) वापको सर्वेक्षणले देखाएको छ। वापले त्यस्ता हात्तीहरुलाई क्रूररतम अवस्थामा राखिएको भनि वर्णन गरेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भकाभक गैँडा र हात्तीका बच्चा मर्दै
सन् २०२२ सम्म पाटे बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य
हात्तीमाथीको क्रूरतम व्यवहार हटाऊने कसरि?
यस सवालमा डा. बर्बाच भन्छन-” हात्तीमाथी हुने यसप्रकारका अमानवीय अभ्यास हटाऊने नै हो भने सबैभन्दा पहिला त बिश्वभरका पर्यटकलाई शिक्षित गर्नु आवश्यक छ। हात्तीमाथी गरिने सबै अमानवीय गतिविधिलाई निस्तेज पार्न केहि कडा कानुन र नियमहरु ल्याउनुपर्नेछ।
हात्तीहरुलाई बन्दी बनाईएको बारे थाइल्याण्ड, लाओस, भारत, श्रीलंका र नेपालमा हात्तीहरुको प्रयोग हुने स्थानहरुमा गई अध्ययन गरिएको थियो। यी देशहरुका २०० स्थानमा सर्वेक्षण गरिएका ३ हजार भन्दाबढि हात्तीहरुमध्ये २ सय जति हात्तीले मात्र आरामपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका थिए तैपनि ती हात्ती मानव नियंत्रित नै थिए।
सबैभन्दा दयनिय अवस्थामा थाइल्याण्डका हात्ती रहेको पाइएको छ। सन् २०१६ मा थाईल्याण्डमा मात्रै ३ करोडभन्दा बढि पर्यटक भित्रिएका थिए जसमध्ये ४०% पर्यटकले हात्ती सफारी गरि फर्किएका थिए। यसको अर्थ १ करोड ३० लाख पर्यटकले हात्तीको सफारी गरेका थिए।
थाइल्याण्डमा अधिकांश हात्तीलाई पर्यटन उद्योगमा जवर्जस्ती घुसाईने गरेको पाईएको छ। पर्यटन उद्योगकै लागि भनेर हात्तीलाई सानैदेखि जंगलबाट समातेर रत्याऊने गरिन्छ। यसरि रत्याऊँदा उनीहरुमाथी क्रूरतम अमानवीय व्यवहार समेत गरिने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। हात्तीका `माऊते´ हरुको पारिश्रमिक खासै राम्रो नहुनाले पनि माऊतेले हात्तीलाई सम्हाल्ने तरिकामा पनि फरक परिराखेको हुन्छ।
एशियाका हात्तीहरु प्रकृति संरक्षणका लागी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था CITES द्वारा जारी गरिएको लोपोन्मुख प्रजातिको सूचीमा पर्दछन। तर, एशिया र अफ्रिकामा घुम्न आऊने अधिकांश पर्यटकको घुमफिर लिस्टमा हात्ती सफारी नै रहेको हुन्छ। धेरैजसो पर्यटकले हात्ती सफारीलाई मनोरञ्जन र बहादुरीको रुपमा लिने गर्दछन। तर, उनीहरुको मनोरञ्जन र बहादुरीका पछाडी हात्तीमाथी हुने क्रूरतम ब्यवहारलाई बिरलैले मात्र ख्याल गरेका हुन्छन।
यहाँ क्लिक गरि भिडियो हेर्नुहोस
हात्तीहरु मात्र होईन, डल्फिन, बाघ, सिंहलगायत धेरै जंगली जनावर मानव क्रूरताको सिकार बनिराखेका छन। उनीहरुलाई मानिससंग घुलमिल हुनको लागि कडाभन्दा कडा हतकण्डा अपनाईन्छ। यसले गर्दा अधिकांश जनावरको मानशिकतामा अपुरणणिय क्षती पुगिराखेको छ।
(द प्लानेट भ्वाइस बाट)
एनएमबि बैंकले पायो ‘दि बैंक अफ दि इयर